GNU / Linux အတွက်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်း console emulators | Linux မှ
GNU / Linux အတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏သမိုင်းသည်အတော်အတန်အသစ်ဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးသာမန်လူများဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်မှုများစွာရှိခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင် Firaxis ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများမှထုတ်ဝေသော (နောက်ဆုံးတွင်) အရေးကြီးသောစီးပွားဖြစ်ဂိမ်းများစွာ၏မူလဗားရှင်းများရှိသည်။ ဤသည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ, Steam ကိုကျေးဇူးတင်သည်။ GNU / Linux အတွက်မူရင်းဂိမ်းအရေအတွက်ကဆက်လက်တိုးပွားနေတုန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ emulators အရေအတွက်ကထူးခြားနေပါတယ်။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ NES, SNES, PS2, Wii စသဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံး console များမှမမေ့နိုင်သောဂန္တ ၀ င်များကစားနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏စိတ်ကူးသည်ပလက်ဖောင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကောင်းဆုံး emulators များစာရင်းကိုသာဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်၊ သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုအသေးစိတ်မရှင်းပြဘဲဖြစ်သည်။ ၎င်း emulators တစ်ခုစီအတွက်အထူးဆောင်းပါးတစ်ခုလိုအပ်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များကိုသတိရသင့်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဤနေရာတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သည်။
2 SNES emulators
4.2 PCSX ကိုပြန်တင်သည်
5 PlayStation2emulators
7.1 DOSBox အတွက်လူသိ
8 Arcade Emulators
FCEUX ၎င်းသည် GNU / Linux အတွက်အကောင်းဆုံး NES emulator ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလူကြိုက်များသောဖြန့်ဝေမှုအားလုံး၏ repositories တွင်ရနိုင်သည်။
တွင်တပ်ဆင်ခြင်း Debian / Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
တွင်တပ်ဆင်ခြင်း Fedora နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
sudo yum fceux install လုပ်ပါ
တွင်တပ်ဆင်ခြင်း မုတ် နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
BSNES ဒါကအခြားအလွန်ကောင်းသော SNES emulator သည်။ တကယ်တော့ ZSNES ရော BSNES နှစ်ခုလုံးကအရမ်းကောင်းပါတယ် အဆိုပါနှစ်ခုထစ်မရှိဘဲတော်တော်များများဂိမ်းတိုင်းပြေး။ သို့သော် BSNES တွင် ပို၍ လွယ်ကူသော interface ရှိသည်။
sudo yum bsnes install လုပ်ပါ
ZSNES တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် SNES emulator အလွန်လူကြိုက်များ။ 32-bit hardware တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း emulator သည် 64-bit application တစ်ခုဖြစ်သည်။ netplay၊ multi-player online mode ကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
တွင်တပ်ဆင်ခြင်း Debian / buntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
sudo yum zsnes install လုပ်ပါ
စီမံကိန်း64 ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးအတွက်မူရင်းဗားရှင်းများရှိသော်လည်း Nintendo 64 အတွက်အကောင်းဆုံး emulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဝိုင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၎င်းကို GNU / Linux တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ GNU / Linux အတွက်မူရင်းဗားရှင်းရှိသည့်အခြားနည်းလမ်းများရှိသော်လည်း၊ Mupen64 နောက်ထပ်၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရန်နှင့် install လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။
ePSXe ဒါဟာဝေးအားဖြင့်အားလုံးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး emulator ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Arch Linux မှလွဲ၍ ၎င်း၏ GNU / Linux ဖြန့်ချိမှုအများစုတွင်၎င်း၏တပ်ဆင်မှုသည်အတော်လေးခက်ခဲသည်။
တွင်တပ်ဆင်ခြင်း Arch Linux ကို နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
နောက်ထပ်တော်တော်လေးကောင်းသော Playstation emulator လို့ခေါ်တယ် PCSX ကိုပြန်တင်သည်အားလုံးအဓိကဖြန့်ဝေများအတွက် packages များရှိပါတယ်ရာ။
sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ pcsxr
sudo yum pcsxr ထည့်သွင်းပါ
sudo pacman -S ကို PCxr
PCSX2 ၎င်းသည်လက်ချောင်းအစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသောအကောင်းဆုံး PlayStation2emulator ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်ပါက Cross-platform တစ်ခုဖြစ်သည်။
တွင်တပ်ဆင်ခြင်း Ubuntu ကို နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
လပိုင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ emulator သည် GameCube၊ Triforce နှင့် Wii ဂိမ်းများကိုကစားပါ.
yaourt -S လင်းပိုင် -emu-git
Stella Atari 2600 ကိုအတုယူရန်ကြိုးစားသည့် GNU-GPL လိုင်စင်အောက်ရှိစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမူလက GNU / Linux အတွက်ဖန်တီးခဲ့သော်လည်းယခုလက်ရှိ Mac OSX, Windows နှင့်အခြား operating systems များနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။
sudo apt-get install လုပ်ပါ
yum stella ကို install
DOSBox အတွက်လူသိ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် DOS emulator ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများသို့သယ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူစေသော SDL library ကိုအသုံးပြုသည်။ တကယ်တော့ Windows, BeOS, GNU / Linux, MacOS X တို့အတွက် DOSBox ဗားရှင်းတွေရှိတယ်။
DOSBox သည် ၂၈၆/၃၈၆ realmode protected-CPU၊ XMS / EMS ဖိုင်စနစ်များ၊ Tandy / Hercules / CGA / EGA / VGA / VESA မော်နီတာများ၊ SoundBlaster / Gravis Ultra အသံကဒ်များကိုလည်းတုပသည်။ ဤကျောက်မျက်သည်ကောင်းသောနေ့ရက်များကိုပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
sudo apt-get install လုပ်ရန် dosbox
dosbox install sudo yum
sudo pacman -S dosbox ကို
MAME (Mအကြိမ်ကြိမ် Arcade Mအာခန် Emulator) ခွင့်ပြုပါတယ် အဟောင်း Arcade ဂိမ်းအတုယူ ပိုမိုခေတ်မီသောယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်စက်များ (PCs, laptops, etc) တွင်ပါ ၀ င်သည်။ လောလောဆယ် MAME သည် arcade video games ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ အတုယူနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်ဂိမ်းများသိမ်းဆည်းထားသော ROM ဖိုင်များကိုအသုံးပြုသည်။
sudo apt-get mame ထည့်သွင်းပါ
ကြိုးစားရကျိုးနပ်နောက်ထပ်လူကြိုက်များ interface ကို gmameui ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ၎င်းသည်တရားဝင် Debian / Ubuntu repositories တွင်မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် Fedora နှင့် Arch Linux repositories တွင်ရှိသည်။
ym gmameui install လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » GNU / Linux အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း console emulators
ပထမအချက်အနေဖြင့်အလွန်ကောင်းသောလမ်းညွှန်အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါသည်၊ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ Firaxis ကဲ့သို့ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများကထိုသို့ပြုခဲ့ပါက Ubisoft နှင့် Bethesda တို့က GNU / Linux အတွက်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုမှထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုပါ။ Civilization5နှင့် X-Com တို့ကို 2K Games နှင့် Aspyr နှင့် Feral တို့၏ဆိပ်ကမ်းများမှဖြန့်ဝေသည်။ အကယ်၍ ၂၀၁၄ သည် GNU / Linux ထဲသို့ရေငွေ့ဝင်သည့်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၈၇၀ ခေါင်းစဉ်ရှိလျှင်၊ ၂၀၁၅ သည် AAA ဂိမ်းများ၏နှစ်ဖြစ်ပါက Great AAA ခေါင်းစဉ်များလာမည်
သင်မှန်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါပြင်ဆင်ပြီးပြီ ဒီအချက်ဟာ GNU / Linux ရှိ AAA ဂိမ်းတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်တယ်။ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 🙂
ဘုရားသခင်ကမင်းငါ့သားကိုမင်းကြားလား ... ငါကြယ်ပွင့် ၂ ကိုကစားနိုင်တယ် ...
Gamboy မှ GB အရောင်မှ GB asdf များသည်pokemón: laughs ကိုကစားရန်ပျောက်နေသည်
ZSNES အပိုင်းတွင် BSNES ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့သည် command များကိုထားကြောင်းသတိပေးရန်ဖြစ်သည်။
မည်သူမဆို maximus arcade သို့မဟုတ် hyperspin ဖို့အခြားရွေးချယ်စရာသိလား? သငျသညျတူညီတဲ့ interface ကိုအတွက်အများအပြား consoles စကိုသုံးနိုင်သည်, ထိုသို့သင်သည်သူတို့၏ဖမ်းယူနှင့်အတူဂိမ်းများ၏စာရင်းပြသထားတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, retroarch ခွင့်ပြုပါတယ်
$ yaourt advancemame Advancecan ကိုစကင်ဖတ်ပါ
အလွန်ကောင်းသောစာရင်းပါပလော, ဂုဏ်ပြုလွှာ။ အမှန်တရားကတော့ငါဟာအတုအယောင်များစာရင်းကိုယနေ့အချိန်ကြာမြင့်စွာမတွေ့ဖူးဘူး၊ အသစ်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Neogeo / CPS1 (စွမ်းအား) အထိချောချောမွေ့မွေ့ run ချင်သော ARM Bugs (Raspberry Pi, Cubieboard နှင့် Odroid c2) သုံးခုရှိသောကြောင့် emulators ၏ခေါင်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်အလုပ်များနေစေပါသည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များအတွင်း။ ဒီတော့ငါနောက်ထပ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကိုပျော်မွေ့ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကို ဦး စွာတောင်းခံပါတယ်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲသူများကို ၀ င်းဒိုးဗားရှင်း (သို့မဟုတ် android / mac) သာရှိပြီး၎င်းရဲ့ကုဒ်ပိတ်ပြီးအရှိဆုံးလေးစားမှုရှိသည့်အီးမေးလ်ကိုအီလက်ထရောနစ်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးလျှင်သိနိုင်လျှင်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်သူများအားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်သည်။ မည်သည့်ပလက်ဖောင်းကိုမဆို portable လုပ်ပြီး code ကိုစစ်ဆေးပြီးတိုးတက်စေရန် "သင်၏ကုဒ်ကိုဖွင့်ပါ" မှရရှိနိုင်သောကောင်းကျိုးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသော developer များ (ယောက်ျားများလာပါ၊ သိသည်) ဥပမာ Neogeo / CPS1 / CPS2 emulators (အခြားသူများအကြား) Nebula နှင့် Winkawaks တို့ဖြစ်သည်။ သီးခြားအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သော ProjectX နှင့် PCSX64 ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများသည် DirectX အပေါ် အခြေခံ၍ plug-in များအပေါ် အခြေခံ၍ emulators; ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Opengl version ကို port လုပ်ဖို့ developer တွေကိုအားပေးဖို့ပဲ။ အခြားသူတွေရှိတာပေါ့၊ သူတို့ထင်တာကိုငါမသိဘူး။
အကြံပြုချက်များအတွက်“ Libretro” နှင့်၎င်း၏ retroarch အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်၊ interface တစ်ခုတွင်ကွဲပြားခြားနားသော cores များပါဝင်သည်။ နောက်ထပ်တစ်ခု, Emulationstation: emulators ၏ Kodi ။
ငါ Arcade တစ်ခုလုပ်နေတယ်၊ ​​ငါမှာစီမံကိန်းရှိတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်သူမှမသုံးတဲ့ pc ရှိတယ်နောက်ဆုံးကတည်းကငါအခုထိငါလုပ်နေတယ်။
ငါ Funtoo နှင့်အတူလုပ်နေတယ်, ငါ emulationstation, retroarch ပေးသော emulators ၏ pack ကိုအသုံးပြုသည်ရှေ့တန်းအဖြစ်, အရာအားလုံးကောင်းနေပါတယ်, ငါစီမံကိန်းအတွက်ဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလှူငွေ။
Nintendo 64 အတွက် Mupen64Plus + M64py ကိုကျွန်တော်အကြံပေးသည် qt ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော frontend ဖြစ်သောအလွန်ကောင်းပါသည်
GBA နှင့် GBC အတွက်အကောင်းဆုံး emulator သည် VBA-M ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် VisualBoyAdvance စီမံကိန်း၏လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်ပြီးအမှားအယွင်းများစွာကိုဖြေရှင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Linux နှင့် windows များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
မှန်ပါတယ်၊ Game Boy Advance emulator နှင့် Linux ပေါ်တွင် Desmume ရရှိနိုင်သည့် Nintendo DS emulator ပျောက်ဆုံးနေသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာအကောင်းဆုံး PSP ပဲ၊ ကျွန်တော်အဲဒီမှာဘယ်တော့မှမစမ်းသပ်ခဲ့ပေမဲ့၎င်းရဲ့ linux ဗားရှင်းရှိတယ်
PPSSPP သည် Fedora ၂၁ တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
အကြံပြုချက်များကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အချို့ကိုငါချန်ထားခဲ့ပြီး၊ စာရေးသူကိုကျွန်ုပ်သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးသည်တရားဝင် ArchLinux repositories တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းပါသည်။
Sega Mega Drive / ကမ္ဘာ ဦး ၃၂x - Gens / GS (# pacman -S gens-gs)
Arcade: MAME (# pacman -Sdlmame)
NintendoDS- DeSmuMe (# pacman -S desmume)
GUI / Catalog Gelide ကိုသုံးပါတယ်။ ($ yaourt-gelide-git)
စာရင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ BSNES ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ Debian တွင်ရိုက်ကူးခြင်းမရှိသော်လည်း emulators များစုစည်းထားသည်။
Snes အတွက်ငါ ubuntu, fedora နဲ့ opensuse repositories မှာရရှိနိုင်တဲ့ snes9x အနည်းငယ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
ငါသည်လည်း slackbuilds.org မှာရရှိနိုင်သည့် slackware အပေါ်စမ်းသပ်ပြီး
၁။ BSNES ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် Debian တွင်၎င်းအမည်နှင့်ဆင်းသက်လာသည် (အခြားဖြန့်ဝေမှုများတွင်ကျွန်ုပ်မသိပါ) ။
၂။ သူတို့ဟာငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mednafen ဆိုတာကိုသူတို့မေ့သွားတယ်။ ၎င်းသည် Debian နှင့်ဆင်းသက်လာသော repositories တွင်လည်းရှိသည်။ မှတ်ချက် - Ubuntu Mate214.04-bit ကို install လုပ်ပြီး Mednafen 64 (Ubuntu 0.9.33.3 Utopic Unicorn အတွက် Ubuntu 14.10 Trusty Tahr အတွက်မူသည် 14.04.D.0.8 ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ အကုန်ပိုင်းကတည်းကထည့်သွင်းထားပါသည်။ ) ။ ငါလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့လား အလွန်ရိုးရှင်း: ငါအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုစစ်ဆေးခဲ့သည် http://packages.ubuntu.com/trusty/mednafen နှင့် http://packages.ubuntu.com/utopic/mednafen libvorbisidec1 သည် Utopic ဗားရှင်းတွင်နောက်ထပ်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလိုအပ်သည် မှလွဲ၍ ၎င်းတို့သည်တူညီမှုနီးပါးရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ Synaptic ကနေ install လုပ်ပြီးရင် Mednafen ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ အိုင်တီအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ command line ကနေအလုပ်လုပ်တယ်။ mednafen.sourceforge.net သို့သွားပြီးအတုလိုက်သည့်ပလက်ဖောင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် (၎င်းတို့သည် ၁၄ ကဲ့သို့) ။ ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းများ!
Sega Gnes emulator မှာကျွန်တော်လွင့်စင်သွားစေခဲ့တဲ့ free-to-air (နှင့်မကြာသေးမီက) ဂိမ်းကတော့ 'အိုး Mummy Genesis'
Juas! ငါကဖန်တီးသောအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာဂိမ်းအကြောင်းပြောစရာမလိုဘူး။ မင်းကိုကြိုက်လို့ဝမ်းသာပါတယ်
Manjaro မှာအလုပ်လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Dolphin ဗားရှင်းနဲ့ Mesa drivers တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Intel 4000 ဂရပ်ဖစ်တွေကိုကျွန်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ Wii ရဲ့ Smash Bross ဟာအဆင်မပြေပါဘူး။
ငါ emulators ကိုနှစ်သက်တယ်။ မှတ်စုကအရမ်းပေမယ့် PSP အတွက် ppsspp အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ emulator ကိုငါပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းများကိုကောင်းစွာလည်ပတ်စေသည်။ ePSXe အတွက်သင်တပ်ဆင်ထားသည်မှာ ia32- ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ရှိ libs စာကြည့်တိုက်သည် emulator ကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ဖွင့်သည်။ သို့သော် PSS ဂိမ်းများကို OpenGL ဖြင့်ကစားနိုင်ပြီးပိုကောင်းသောဂရပ်ဖစ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောဂိမ်းများကို VBA-M တွင်တွေ့နိုင်သည်။ PCSXR ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ Gamboy download စာမျက်နှာတွင်သင်ရှာမရပါက၎င်းကို pkgs.org မှလူကြိုက်အများဆုံး Linux ဖြန့်ချိမှုများအတွက် package အားလုံးနီးပါးရှိသောစာမျက်နှာမှကူးယူရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
Kega Fusion ပျောက်ဆုံးနေသည်။ Sega Genesis (ဥရောပ၌ Megadrive)၊ Sega CD နှင့် 32x တို့အတွက် emulator, မည်သည့် desktop သို့မဟုတ် GTK ပတ် ၀ န်းကျင် + တွင်မဆိုတီထွင်သူများ၏ link တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ http://www.carpeludum.com/kega-fusion/
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်မှာ mario bros နဲ့ mario kart ရှိတယ်
လူတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါ၊ ဤရာထူးကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်တောင်းပန်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာရှိ emulators ခေါင်းစဉ်အတိအကျကိုပြန်လိုချင်ခဲ့သည်။
ငါ Linux အတွက်အသစ်တစ်ခုပါ။ ဖြစ်နိုင်တာတွေအားလုံးကိုသိသင့်သိထိုက်တာကိုကျွန်တော်မဖတ်ရသေးပေမယ့်ငါကဝန်ခံခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်သံသယများရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် zsnes ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် 64-bit Crunchbang ကို အသုံးပြု၍ package များကိုမရရှိနိုင်သဖြင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်ပိုမိုနားလည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် package ကို 32-bit မှ download လုပ်ရန်၊ dpkg -i –force-architecture နှင့်မှီခိုမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ဗိသုကာကိုအတင်းအကျပ် ပြု၍ မှီခိုမှုများကို install လုပ်ပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမမေးခွန်းပေါ်လာသည်မှာမှန်ပါသလော။ ၎င်းသည်စနစ်အားမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသလား။
ဒီမှာဒုတိယမေးခွန်းပေါ်လာပြီ၊ ကျွန်တော်ဒီသိမ်းဆည်းလိုက်တဲ့စက်ထဲကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ RAM 5315GB ပါတဲ့ Acer Aspire2ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ 64-bit system တစ်ခုကို install လုပ်လို့ရလား။ ငါဘာကြောင့်ထည့်သွင်းခဲ့တာလဲ ကောင်းပြီစမ်းသပ်ဖို့ပဲ၊ အရင် installs တွေဟာ 32-bit ပဲ။
စက်များအတွက် Raine emulator သည် p3 1Ghz 256mb (သို့) ထို့ထက်ပိုသောဂယ်လီယမ်ဒရိုင်ဘာနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် NeoGeo, cps1 စသည်တို့ကိုအောင်မြင်စွာတုပပြီးဖြစ်သည်။
"DeSmuMe" emulator ကို install လုပ်ရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်း
ပြုသကဲ့သို့ Nintendo DS အဘို့။
Gravit - Freehand သို့မဟုတ်မီးရှူးမီးပန်းများအတွက်နောက်ထပ်ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်